Mmezi mmezi nke ịkwanyere egwuregwu n'ala-News-Topflor China ejedebeghị
Mmezi nkà nke ịkwanyere egwuregwu n'ala
Echiche:81 Onye edemede: Onye ndezi saịtị Bipụta Oge: 2021-01-26 Mmalite: Saịtị
Ọ bụrụ na ịchọrọ iji ụlọ egwuregwu PVC mee ogologo oge, na mgbakwunye na ị attentiona ntị na nkọwa ụfọdụ n'oge eji, mmezi kwa ụbọchị dịkwa ezigbo mkpa. Taa, m ga-ekwukarị banyere ụfọdụ ndozi na mmezi nka nke PVC flooring.
1. Nchedo ọkụ: Ọ bụ ezie na ala egwuregwu PVC bụ ala na-ere ọkụ (B1), ọ pụtaghị na ọkụ agaghị ere n'ala ahụ. Ya mere, mgbe ndị mmadụ na-eji ụlọ egwuregwu PVC eme ihe, ejila ọkụ ọkụ sịga, ihe anwụnta, wdg.
2. Nlekọta ala na-arụ ọrụ mgbe nile: Jiri nchapu mmiri na-anọghị ọcha iji kpochapụ ala egwuregwu PVC. Ejila acid dị ike ma ọ bụ ihe alkali dị ọcha hichaa ala. Na-arụ ọrụ nhicha na ndozi mgbe niile;
3. Aja na ajịrịja ajịja: A ga-etinye aja na akwa gravel na-eche nche n'ọnụ ụzọ ụlọ na ụlọ nzukọ ebe eji eme egwuregwu egwuregwu PVC iji gbochie akpụkpọ ụkwụ ibubata ajịrịja n'ime ụlọ na ịkọ ala ala;
4. Nchedo ihe na-ejikwa ya: Mgbe ị na-ejikwa ihe, ọkachasị ihe dị nkọ dị na ala, adọkpụrụla n’ala iji gbochie ala imerụ ahụ;
5. Mmetọ mmetọ: A ga-ehichapụ ink, nri, kegriiz, wdg na ala egwuregwu PVC, wee jiri ihe eji eme ka a gbanye ya iji kpochapụ ihe ndị ahụ. Ọ bụrụ na mpempe akwụkwọ akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ anụ ndị fọdụrụnụ siri ike iwepụ, ịnwere ike iji mkpuchi kpuchie ya na mmanụ na-esi ísì ụtọ. Wunye senti paini n’ala iji mee ka ọ dị ọcha, ma mgbe ị na-ehicha ya, na-eme ka ọ dịkwuo elu;
6. Okwu chọrọ nlebara anya: Nhicha ala enweghị ike iji bọọlụ, mma, na ihe ruru unyi na-enweghị ike ihicha ya. Kpọtụrụ ndị dị mkpa. Ejila acetone, toluene, na ọgwụ ndị ọzọ na-enweghị atụ;
7. Chemical echebe: zere a nnukwu ego nke mmiri na-anọ n'elu ala ruo ogologo oge. Ọ bụrụ na mmiri agbaala ala ruo ogologo oge, ọ nwere ike ịbanye n'okpuru ala ma mee ka ala gbazee ma hapụ nrapado ya. O nwekwara ike ime ka akwa mmiri na-echebe ihe dị n’elu ala mee ka ala. Mmetọ ya, ọ nwekwara ike ime ka nsị nsị banye n’ime ala ma mee ka ala na-achagharị;
8. Nchedo Sun: zere ikpughe ọkụ na ìhè siri ike, ma rụọ ọrụ dị mma nke itinye ụzarị ultraviolet na ala iji gbochie ụcha na ịcha ala.
Isi ihe omimi nke mgbatị-pvc